Madaxweyne Clinton Oo Isbitaal La Dhigay Iyo » Axadle Wararka Maanta
Madaxweyne Clinton oo isbitaal la dhigay iyo
Sacramento (Axadle) – Madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton ayaa soo kabanaya ka dib laba maalmood oo laga daaweynayay caabuq ka dhacay isbitaal ku yaal California, sida ay dhakhaatiirtiisu sheegeen.
75 jirkan ayaa la dhigay Xarunta Caafimaadka ee Jaamacadda California Irvine Medical Center fiidnimadii Talaadada waxaana ku dhacay caabuq aan ahayn COVID-19 sida uu bartiisa Twitter-ka ku sheegay afhayeenka Clinton Angel Urena.
“Wuxuu ku jiraa hagaajin, niyad wanaag, wuxuuna si aad ah ugu mahadcelinayaa dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha iyo shaqaalaha siinaya daryeel aad u wanaagsan,” ayuu qoray Urena. Af -hayeenku oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa hadalkiisa sii raaciyey: “Wuu kacay, wuu kaftamay oo wuxuu soo jiitay shaqaalaha isbitaalka.”
Clinton ayaa isbitaalka tagay kadib markii uu dareemay daal waxaana laga helay caabuqa dhiigga oo dhakhaatiirtu ay rumeysan yihiin inuu ku bilowday caabuqa kaadi mareenka sida uu baahiyey telefishinka CNN oo soo xiganaya dhakhaatiirta.
Waxay intaas raaciyeen: “Waxaan rajaynaynaa in uu dhawaan gurigiisa aado.”
Clinton, oo kasoo jeeda xisbiga Dimuqraadiga oo madaxweyne ahaa 1993-2001, ayaa dhowr jeer horey Isbitaalka loo dhigay, iyadoo sanadki 2004 lagu sameeyey qalliin seddex geesle ahaa, sidoo kalana sanadkii 2010 ayuu maray qalliin dhanka wadnaha ah kadib markii uu furmay halbawle, wuxuuna telefishinka CNN sheegay in xaaladda hadda Isbitaalka loo dhigay aysan aheyn mid la xiriirta arrimaha wadnaha.
(This story #Madaxweyne Clinton oo isbitaal la dhigay iyo. Has not been edited by Axadle Staff and has been auto-generated from the Syndicate feed.) while we endeavor to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information or related graphics contained on the post for any purpose.